Rita, Writing for My Sake!: June 2009
Posted by Rita at 6/26/2009 11:32:00 PM4comments Links to this post
Posted by Rita at 6/24/2009 09:04:00 PM 10 comments Links to this post
3:39 PM He: အင်း
me: :) coffee သွားဖျော်လိုက်ဦးမယ်
4:46 PM He: ကိုယ်ပြန်ရောက်ပြီ
5:15 PM me: yes
5:16 PM စားပြီးပြီလား
me: ဟင်းချက်နေလို့ပါ (အလကား လျှောက်ပြောတာ။ ဟင်းက cityhall က ၀ယ်ထားတွေ စားနေတာ)
အင်း ခုနက စားလဲစား
5:17 PM လှန်းရမယ်
me: လှန်းထားတာတွေ ရုပ်သိမ်းရမယ်
He: ဒါဆိုရင် ရဲဘော်ဆက်လုပ်
5:18 PM မရှင်းတာရှိရင်မေးပါ
me: ခုခဏနားမယ်He: ခွင့်ပြုတယ်
me: ယောက်ျားယူရင် ပိုဆိုးမလား မသိဘူးနော်
5:19 PM He: ဘာဖြစ်လို့လဲ
me: အဲဒါကြောင့် ဘီလျှံနာပဲ ယူချင်တာ (free kick)
He: ဖြစ်လာပြန်ပြီဒီရောဂါ (မသိလို့။ အဲဒီရောဂါက တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာ။ ပေါ်လိုက် ပျောက်လိုက် မဟုတ်ဘူး)
5:20 PM me: အဲဒါမှ မလုပ်ချင်တာတွေ မလုပ်ဘဲနေလို့ ရမှာပေါ့ (ဒါက corner)
5:21 PM ကလေးကိုလဲ ကိုယ်တိုင်ဘဲထိန်းမယ်
me: လုပ်ပေးချင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ပြဿနာ မဟုတ်ဘူးလေ
He: ထမင်းဟင်းကလဲ ထမင်းချက်ကိုချက်ခိုင်းတာ စိတ်မချဘူး
me: မလုပ်ချင်ဘဲ မဖြစ်မနေ လုပ်နေရရင်သာ ပြဿနာ
5:22 PM He: ကိုယ်တိုင်ဘဲချက်မယ်
He: အဝတ်လျှော်တာလဲ ဂျီးမပြောင်ဘူး
မောင့်အတွက် ကိုယ်တိုင်ဘဲလုပ်တော့မယ် (တွေ့လား၊ ယောက်ျားတွေလည်း ရေလာမြောင်းပေး တော်တော် လုပ်တတ်တာ။ သူတို့ကိုယ် သူတို့တော့ ဟုတ်လှပြီ ထင်နေကြတယ်)
me: စိတ်ကူးကလဲ ယဉ်နေပြန်ပြီ
He: မီးပူတိုက်တာကလဲ ကျေမွနေတာဘဲ
5:23 PM မဖြစ်ပါဘူး
မောင်က သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်ကြိုက်တော့ ကိုယ်တိုင်ဘဲလုပ်လိုက်တော့မယ်
ဆိုပြီး လုပ်နေဦးမှာ မြင်ယောင်နေပါတယ် (မြင်ယောင်ရုံပဲ မြင်ယောင်ရမှာ။ တကယ်တမ်း ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး)
5:24 PM အခုသာ တစ်ကိုယ်တည်းဆိုတော့ ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပါ
ကလေးတွေ ဘာတွေနဲ့ ဆိုတော့လဲ ပြောင်းသွားမှာပေါ့ (ပိုတောင် ဆိုးသွားဦးမယ်)
me: အော် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘီလျှံနာ ဆိုရင်တော့ ဒါတွေ လုပ်ရလဲ တန်ပါတယ်လေ (hat trick)
He: နာမည်မှာ ဘီလျှံနာ ပါရင်လဲ တန်တာဘဲလား
5:25 PM me: နာမည်ကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး ပိုင်ဆိုင်မှုကို ပြောနေတာ
5:26 PM He: ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ဘီလျှံနာ ဆိုတဲ့ နာမည်ပါတာကိုပြောတာလား
5:27 PM me: ဟုတ်ဘူး
ဘယ်လောက် ထပ်ရှာနိုင်လဲကို ပြောတာ
5:29 PM He: အော် ဒီလိုလား
5:30 PM me: အင်း ဒီလိုပဲ
He: ဒါဆိုရင်လဲ ပြီးရော မချစ်ဘူးလို့မှတ်လိုက်မယ် (ဟယ် ဒါမှ တို့မောင်ကြီးတော် !)
5:31 PM me: :)
5:41 PM me: ဘာလုပ်နေလဲ
6:09 PM me: ပြန်တာကို နှုတ်ဆက်မသွားဘူး
(ဂိုးသွင်းပြီးမှ စည်းကြပ်ဒိုင် အလံထောင်ပြလိုက်သလိုပဲ။ man out တဲ့)
အလကားပါ။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး။ ဘာမှ တင်စရာ မရှိလို့။
အခန်းဆက်က နောက်တစ်ပတ်မှ နော်။
Posted by Rita at 6/16/2009 10:46:00 PM 14 comments Links to this post
Labels: Making Joke, me, This and That
Posted by Rita at 6/03/2009 09:35:00 PM 12 comments Links to this post
(တေးရေး - မြို့မငြိမ်း
တေးဆို - မေရှင်)
အမြစ်ဖြတ် မရဘဲ အသည်းထဲ စွဲကာပင်
ဆူးကျလည်း ဖက်၊ ဖက်ကျလည်း ဖက်
နောင်တွင် ရိုးမယ်ဖွဲ့ကာ ပစ်မှာစိုး အမျိုးမျိုး ပူတယ်ရှင်
စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့လို့ ချစ်မတဲ့ ယုံအောင်ပင်
တဦးသဘော တဦး ပြော၍ မနေချင်
တကယ်တမ်း မေတ္တာစစ်နဲ့ ချစ်ကြဖို့ပါရှင်
လွန်းပေါင်းတင် ချစ်တဲ့ကြိုးလို ပမာယှဉ်
နှစ်နှစ်ကာကာ တူပင် သက်ဆုံးတိုင် ခိုင်မြဲချင်
ချစ်လျှင် အကျိုး၊ မြတ်နိုး သဒ္ဓါ
တဲအိုပျက်ထဲမှာပင် ပန်းမွေ့ရာ ကြဲတယ်ထင်
ချစ်သူနဲ့ လွဲခဲ့ရင် ရွှေပုံလဲ ဖွဲအိတ်ထင်
စားစား သွားသွား တူပင်
မလှလား စာသားလေးတွေက။ "စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့လို့ ချစ်မတဲ့ ယုံအောင်ပင် တဦးသဘော တဦး ပြော၍ မနေချင်" ဆိုတာမျိုးလေးတွေက မြို့မငြိမ်း မို့လို့ ထွက်လာတာပဲ လို့ တွေးမိရအောင်ပါပဲ။ ကျွန်မတော့ အရင်ခေတ်က အမျိုးသား တေးရေးဆရာတွေကို သိပ် အံ့သြမိတယ်။ သူတို့ ဘယ်လိုများ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ နူးနူးညံ့ညံ့ အတွင်းစိတ်ကို ပေါ်လွင်အောင် ဖွဲ့နိုင်ကြသလဲနော်။
တော်ရုံ စိတ်ဓါတ်တွေ ခက်ထန်နေချိန်မှာဆို ဒါမျိုးလေးတွေ နားထောင်လိုက်ရင်ပဲ နူးနူးညံ့ညံ့ ဖြစ်လာပါရော။
(ခုတလော tense ဖြစ်နေလို့ ကိုယ့်ဘာသာ နှစ်သိမ့်ပြီး တင်ထားတာပါ။)
Posted by Rita at 6/02/2009 10:23:00 PM5comments Links to this post